केही सुन्ने सिर्जनाहरु..... - शखदा साहित्य
केही सुन्ने सिर्जनाहरु.....
4:47 AM mp3
कथाकार दिवाकर नेपालीज्यू, भर्खर एउटा पात्रसँग मेरो भेट भएको छ । ऊ मलाई हातमा समाएर जोडले तान्दै छ । हेरौँ कहाँ लान्छ ? मलाई थाहा छैन कहाँ लाँदै छ भन्ने कुरा । ऊ हष्ट पुष्ट यौवनले भरिपूर्ण भएको पच्चीस–छब्बीस वर्षको जवान ढिटो छ । उसँग म कहाँ दौडनु सक्छु र ? तर पनि उसले तानेपछि मरे छोड्नेवाला छैंन । त्यसैले हुत्तिदै, मुन्टिदै उसको पछि लाग्न बाध्य छु । यो पात्र अरूजस्तो होइन रहेछ । अरूको भावनाको, इच्छाको सम्मान नै नगर्ने ! कस्तो अव्यवहारिक केटो रहेछ ! उसले मलाई केही भन्ने मौका पनि दिएको छैन, हेरौँ मलाई कहाँ लादो रहेछ । म उसलाई पछ्याउँदै छु । अहिले मलाई अनौठो लागिरहेछ । मेरो कथायात्रामा कतिपय ठाउँमा मैले पात्रलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्थ्यो तर अहिले त पात्रले नै मलाई जबरजस्ती तानेर लाँदै छ । मलाई अचम्म लाग्दै छ तर पनि म जाँदै छु । दिवाकर नेपालीज्यू, ल अब म त्यो ठाउँमा आइपुगेको छु, हेरौँ यो कस्तो ठाउँ रहेछ !
सन् २०१० को न्यु इयर इभ मनाइरहेको ठाउँ, नेपालको धेरै गाउँ मध्ये चाँडै नै सहरको रूपमा विकसित भएको सहर—इटहरी । न्यु इयर इभमा देशको प्रसिद्ध गायक गीत गाउन मस्त छ । मेरो पात्र मलाई लिएर ऊ प्रोग्रामको लागि भित्र छिरिसकेको छ । मैले वरिपरि नजर घुमाएँ । धेरै जसो ढिटाढिटी र युगल जोडी देखिन्थ्ये । केटाकेटी र बूढाबूढीको सङख्या कतै चामलमा विया मिसिएका हुनकि जस्ता थिए । इटहरीको चिन्तन चौतारी, कला र सँस्कृतिको अनुपम उदाहरण भएको रेष्टुरेन्ट । मौलिक र प्राकृतिक कलाकृतिले सजिएको विभिन्न जातजातिको सँस्कृति झल्कने नमूनाहरू सायद नेपालकै उत्कृष्ट कलाकृति हो यो । यो मनोरम दृश्य देखाउने मेरो पात्रप्रति म अनुगृहित थिएँ । रेष्टुरेन्ट पस्नुअघि नै यसको कलाको अनुपम प्रस्तुति ढोकामा बनाइएको थरुनीको विशाल मूर्तिले मलाई आकर्षित गरेको थियो । थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको इटहरीमा यो मूर्ति थारु कलाको एउटा प्रतिनिधित्वको रूपमा उभिएको अद्भुत कला थियो । भित्रपस्नेबित्तिकै बाँसको चोयाँले बुनिएको ठूलो कछुवा अनि विभिन्न देवीदेवताको मूर्तिले मेरो आँखालाई लोभ्याएको थियो । यस कलाकृतिलाई धितमरुन्जेल हेरेर आँखालाई विश्राम दिइ सक्दा नसक्दा भित्रको रोमाञ्चक माहौलले मलाई तानिहाल्यो । उक्त पात्र मसँगै छ । हामी टेबुलमा बसिसकेका थियौँ । एकछिनपछि एउटी थारु जातकी जस्ती ठिटी टाइट जिन्स पाइन्ट र फूलवाहुला भएको भेष्ट लगाएर हाम्रै टेबलको मेच बसी । चिसो निकै बढेको थियो‌‌‌‌..........
राम बहादुर बरुवाल said...
धेरै राम्रो छ दिदी